Ya - Motonatata
Maka otu IT
Nchọpụta nsogbu ọsọ ọsọ na Nghọta Actionable
Mee ka arụmọrụ IT efu efu bụrụ eziokwu site na nchọpụta anomaly, mmekọ ihe omume, nyocha arụmọrụ, njikwa ọrụ IT na akpaaka nwere ọgụgụ isi.
Ihe ịma aka nke Otu IT
Ọ gaghịkwa ekwe omume soro na jikwaa mgbagwoju anya IT n'ụzọ siri ike, na-agbanwe gburugburu gburugburu site na usoro ọdịnala na mbọ ndị na-anọghị n'ịntanetị chọrọ enyemaka aka. A na-atụ anya na ndị otu IT ga-eme karịa mgbe ọ bụla site na iji ngwá ọrụ ochie na usoro ihe nketa na-adị ka ọ gaghị agwụ agwụ ma ha na-enwe nrụgide mgbe niile iji mejuputa oru na teknụzụ ọhụrụ. Iji mee ka ihe ka njọ, mmụba ọnụego mgbanwe na ntinye ngwa ngwa na sistemu pụtara oke data nke ndị otu IT ga-ejigide na mgbari na-abawanye nke ukwuu.
ibelata ihe omume ndị ebutere ụzọ
otu ndị jiri AIOps mejuputa usoro nleba anya nke ọma achọpụtala.
Motadata AIOps nwere ike inyere nzukọ gị aka imeri ọgba aghara data wee nweta nghọta na-aga n'ihu, nke nwere ike ime n'ime ọrụ IT gị.
Ngwọta Motadata AIops maka IT Teams
Buru amụma ma gbochie ihe omume tupu ha emee na Motadata AIOps
Bụrụ onye na-agbasi mbọ ike na igbochi nkwụsị ọrụ na nkwụsị ọrụ
Melite arụmọrụ na ike nke ọrụ IT site na ịmegharị akwụkwọ ntuziaka, mmemme ugboro ugboro na AIOps Automation Service.
Hazie, nye ụzọ, ma kenye ndị nka na ụzụ tiketi na-akpaghị aka dabere na algọridim dabere na AI.
Usoro a na-enyere aka ịdekọ ihe niile merenụ na arịrịọ ọrụ maka nchọta n'ọdịnihu yana nweta ọnọdụ mgbe ọ na-edozi nsogbu IT.
Kwado ndị ọrụ nka ka ha jiri ntụnye na nzaghachi ML kwadoro iji chekwaa oge na ilekwasị anya na atụmatụ IT ka mkpa.
Data jikọtara sitere na isi mmalite data dị iche iche wee jiri anya nke uche hụ ya na dashboard dị n'otu, ezigbo oge iji zaghachi ọkwa dị mkpa ozugbo iji hụ na ọga n'ihu azụmahịa.
Jiri CMDB mepụta okirikiri
Jikwaa akụ IT niile site na otu ebe site na iji njikwa akụrụngwa. N'iji usoro nchọpụta na-enweghị onye nnọchi anya yana nke dabere, mepụta nchekwa data CI.
Debe ndị otu ahụ site na ozi akụrụngwa kachasị ọhụrụ site na sistemụ nleba anya nke na-eziga data nhazi maka ngwaọrụ netwọkụ na nchekwa data zuru oke. Jiri data ahụ jikwaa usoro ndụ nke ihe omume, nsogbu ma ọ bụ mgbanwe tiketi.
Jikwaa mgbanwe IT nke ọma
Kwado ndị ọrụ nka ka ha jikwaa mgbanwe nke ọma n'oge usoro ndụ niile gafere ọkwa dị iche iche dị ka nnabata, mmejuputa iwu, nyocha, nlọghachi azụ, wdg site na iji modul njikwa mgbanwe anyị raara onwe ya nye.
Mepụta nkwado na usoro ọrụ ọtụtụ ọkwa iji gbochie ndị ọrụ nka ime mgbanwe na-akwadoghị.
Belata ihe ize ndụ na mmetụta na ndị ọrụ, mee ka ọrụ mmepe dị mkpa dịkwuo ngwa, ma na-ebuga mgbanwe dị mfe, niile ka ị na-ejigide usoro nyocha zuru oke maka mgbanwe ọ bụla.
Gwa okwu IT tupu ha emee
AIOps na-enye nlebanya arụmọrụ na-arụ ọrụ nke ngwa dị oke egwu nke na-enye ndị otu IT ohere idozi nsogbu nke mgbagwoju anya nke data n'ihi mmụba.
Tinye ike mmụta igwe nke ikpo okwu anyị iji chọpụta ihe ndị na-apụ apụ iji chọpụta nsogbu ndị na-abịanụ nke na-ebutebeghị ọkwa ọ bụla.
Ikpo okwu na-abịa na nchọpụta anomaly nke ndị otu IT nwere ike iji na-eche nche na KPI site na iji data dị ugbu a tụnyere data akụkọ ihe mere eme.
Uru maka Otu IT
Motadata na-enyere ndị otu IT aka ịlụso silos IT ọgụ wee nweta ọhụụ zuru oke na ọrụ IT ha.
Nnukwu data jikọtara ọnụ
Motadata na-achịkọta data, nke a tọhapụrụ na ngwaọrụ dị iche iche, iji mee ka njirimara ihe na-akpata gbatịa ngwa ngwa, na-akwado nyocha mbelata, na ịkwado akpaaka.
Ịmụ Igwe siri ike
Otu onye nnọchi anya Motadata na-akpaghị aka usoro nke ịnakọta data site na ọtụtụ isi mmalite, gụnyere data log, nke etinyere n'ime injin AI ya.
Motadata AIOps na-akwado akpaaka nke ihe omume dị oke mkpa dị ka nleba anya arụmọrụ ngwa, ọkwa na imepụta tiketi ihe merenụ, mmụba SLA na mmekọrịta maka RCA.